နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: ညီနေမင်း (နည်းပညာ): ok virus cleaner version4(latest version)
ညီနေမင်း (နည်းပညာ): ok virus cleaner version4(latest version)
ဒါကတော့ မြန်မာပြည်က ထုတ်တဲ့ ok virus cleaner version4နောက်ဆုံးထွက် အခွေပါ. အထဲမှာ virus သတ်ပုံသတ်နည်းများနှင့် တစ်ခြားသော အသုံးဝင်တဲ့ virus ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းများစွာပါဝင်တဲ့ အခွေပါ. ရောင်းဈေးကတော့ မြန်မာငွေ ၁၀၀၀ကျပ်ပါ. ဒါပေမယ့် ပြည်ပ သို့ရောက်နေ တဲ့သူများနှင့် နယ်ဝေးကနေ ၀ယ်လို့မရတဲ့ သူများအဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. နောက်ပိုင်း အထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ် ထည်ပြီးတော့ ဖြည့်စွက်ရေးသားပါဦးမယ်. အားလုံးပဲ ဖတ်သင့်တဲ့ အခွေနှင့်စာအုပ်လေး တစ်အုပ်ဖြစ်ပြီး. အထဲမှာ virus များကို သတ်ဖို့အတွက် tools များစွာလဲ ပါဝင်ပါတယ်. tools များကို အသုံးပြုနည်းများလည်း အထဲမှာ ပါပါတယ်. အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်ဗျာ.လိုချင်ရင်အောက်မှာ Download လုပ်လိုက် ကြပါ.ဒီ link တွေကို ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ကိုရဲထွန်း(ဘန်ကောက်) ကနေ ၀ိုင်းကူပြီး တင်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော့် အင်တာနက်က ဖိုင်ဆိုက်ကြီးတွေ တင်ဖို့သိပ်အဆင်မပြေလို့ပါ။
Posted by P Kyaw Swa at 10:51 AM